Shirkadaha SHIDAAL Baadhista ee badda Soomaaliya Xiisaynaya (Warbixin) | KALSHAALE
Shirkadaha SHIDAAL Baadhista ee badda Soomaaliya Xiisaynaya (Warbixin)
Dec 5, 2018 - 5 Aragtiyood
Hargeisa ( Kalshaale) Astaamo badan ayaa muujinaya in shidaal badda Soomaaliya(Indian Ocean) inuu ku jiro. Astaamahaas waxaa ka mid ah badda sal keeda inuu ka soo siimoobo (seepage), uuna ka soo burqado asagoo dareere ah ama hawo (gas) ah.
Laba bilood muddo ku beegan waxaan ku qoray wepsite kan kalshaale in shirkado shisaal ka danbeeyeen khayrlaawe iyo farmaajo madaxtinimadooda kana saxeewdeen ? Lamana oga wuxuu yahay heshiiskay labada masuul ee xamar la geleen shirkadaha shidaalka badda idian ? Lama yaqaan boqolkiiba intay qaadanayaan shirkadaha shidaalka iyo somaliya intay kala leeyihiin ? Laakiin war aanan hubin waxaan ku hayaa in ka badan80% in shirkadaha shisheeye ka saxeexdeen khayrlaawe iyo farmaajo
2017 kii na waxaan ku qoray wepe site kan kalshaale dib u baadha hadaad rabtaan in labadan nin oo keliyi la galeen hashiis qarsoodiya oon baarlamaan ku sheegga xamar ee aan caqliga badan lahayni waxba ka ogayn heshiiskaas iyagoo u dhago nugul jam somland horumarkeeda iyo wax qabsigeeda dadkaygaw ogaada inaan somaaliya ka dhaxalnay isku dirkeena dhexdeena oo ay caadaytaan isaaq oo lagu diro dhulbahante iyo qama roon warsangeli oo lagu diro isaaq ? Waa waxaynu ka dhaxalnay midawgii soomaliya? Markaynu ku biiraynayna waxaynu ahayn raas qudha oo ah jam somland? Aan soo celino midnimadii jam somland qabiiladeedu lahaayeen oo isu ah ab iyo abti wada dhashay
Shidaalka xamar la gashay kabaniyada shisheeye sharciyan hadaan labada ansixin waa waxba kama jiraan waa kuwan somaliya ee saaxday ee hurdada ka sootoosa marka jam somland wax qabsato
Soomaaliya inay jam somland wax kaga dayato oo waxay samayso jam somland somaliya ka daba samayso mooyaane ma awoodo inay kaligood wax curiyaan? Adeer dad badan baa u haysta inaan maago somaliya igama aha ee waa runtay matan ? Wadaan samaynaynaa waday samayn beeraan qodaynaynaa way qodan wadan baan tagaynaa isla wadankii bay tagayaan wadan baa wax nagu caawin wixiibay waydiisan gaadhibaanu samaynay loox ka samaysan xaaji khamsiin bay intay meel noo taageen yidhaahdeen baabuur aan xabadu karin baanu samaysanay hadda sarajoogay ku xaaran dadka waxaa shubayaa ? Waan u khajilaa waan ururiyaa waxaanan tusnaa caalamka ? Waxaanu ku nidhi waa dad curintu ka maqantahay sidaasay noogu dhegen yihiin ee maaha somali jacayl? Annakaa ka soolisan kana jaclayn jam somland 1960kii markaan la midawnay waxay noo bixiyeen soomali qaldaan? Aad bay u qosleen gaaladu somali liin waaye ? Waxay u jeedeen somali land lama goodle faradheer ? Waxaanuku qasabnay 1960 soomaalinimada ? Way ka dheregsan yihiin waanay imanaysaa aqoonsigii non doona iyo nin diidanba inshallaah? Waa yimi galadaan sugayniyo wakhtigii waa ina soo gaadhay
Habdhaqanka siyaasadeed ee eghiopa iyo jam somland wuxuu iku bedeli dhanka wanaagsan dhawaan? Mr biixi wuxuu u dhaqmaa sidii dal aqoonsi caalamiya haysta? Waxaa ka maqan madaxweynaheena inuu is daad raaciyo laakiin annakaa ku jirna hawshuu ka gaabiyey ? Dhawaana waxaydun arki oo maqli dpontaan inshalla isbedel fiican ? Mr biixi intuu ilduufay anagaa wadna waanay hagaagi inshalla waliba si wanaagsan oo degen ayey u dhici ? Waana siyaasadoo way nala qalibmi karkaa ? Kolayse dhanka wanaagaanu u badinaynaa